Hospitaalli Waliigala Haramaayaa tajaajila bilisa Birrii miiliyoona walakkatti tilmaamamu laate – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Hospitaalli Waliigala Haramaayaa tajaajila bilisa Birrii miiliyoona walakkatti tilmaamamu laate
On Sep 20, 2021 78
Finfinnee, Fulbaana 10, 2014 (FBC)- Hospitaalli Waliigala Haramaayaa tajaajila bilisa Birrii miiliyoona walakkatti tilmaamamu laateera.
Hospiitalichi dhukkabsattootaa bu’uu gadameessaan hubamaniif tajaajila wallaansaa bilisaan laateera.
Tajaajila bilisa kan laatee hospitaalichi dhaabbata tola oltoota Weengiis Off Hiils waliin ta’uu himameera.
Dhukkubbiin bu’uu gadameessaa keessaayyuu kutaa baadiyaa biyyattitti akka heddumaatuu ta’u kan himan daayreektarri meedikaala hospitaalicha Dooktar Solomoon Haarihuun,kanafis dhukkubsattoota 150 godina Harargee bahaa aanoolee adda addaa keessaa walitti babba’aaniif laatamuu ibsaniiru.
Dhibichi meeshaalee jajjaboo kaasuu dabalatee nyaata madaawalaa nyaachuu dhabuun akka mudatuu kan himan qindeessituun sagantaa dhaabbatichaa Dooktar Feebaan Gabra Igzaabiyeer, tajaajila bilisaa laachuu dabalatee deeggarsoota Qamadii fi Ruuzii taasiseera.
Iyyoonaadaab Andu’aalemtu gabaase
Ministeerri Fayyaa ijaarsa Laabraatooriiwwanii eegalchiisuuf waliigaltee mallatteesse
Gosti vaayrasii koroonaa haaraan gara biyyaa akka hin seenne to’annaan taasifamaa…
Magaalaa Shashamanneetti Proojektiin Talaallii Koleeraa lammiilee kuma dhibba 1 ol…
Guyyaa har’a guutuu Oromiyaatti talaallii vaayrasii koroonaa laatamaa jira
Abbaan Gadaa Karrayyuu garee shororkeessaa shaneen…
Waamicha MM Abiy Ahimad “Gara biyyaa gala” jedhu lammilee…
Ga’uumsi duula birmadummaa gareen shororkeessaa ABUT…
Mahaal Meedaa, Caffaa Roobiit,Harbuu fi Makooy harka diinaa…
Ministeerri Fayyaa ijaarsa Laabraatooriiwwanii eegalchiisuuf…
Gosti vaayrasii koroonaa haaraan gara biyyaa akka hin seenne…
Magaalaa Shashamanneetti Proojektiin Talaallii Koleeraa…
Oduu biyya keessaa10558